HALAKAN KA AQRISO W/W MOGTIMES
Sunday February 14, 2021 - 10:03:58 in Wararka by Super Admin
Gaari ay la socdeen Imaamka Mudullood iyo odayaal kale oo Muqdisho lagu rasaaseeyey
War hadda nasoo gaaray ayaa sheegay in gaari uu la socday Imaamka Mudullood Imaam Maxamed Yusuf lagu rasaaseeyey magaalada
Muqdisho, islamarkaa na uu ka dhashay khasaare.
Weerarka ayaa ka dha cay agagaarka Maxk am adda Gobolka Banaadir, waxaana lagu warramay aa inay gaysteen ciidamada ilaalada asluubta ee Xabsiga Dhexe.
Wararka ayaa sheegaya in gaariga la wee eraray ay sidoo kale Imaamka ku wehliyeen xub no ka tirsan odayaasha dhaqanka beelaha Mud ullood, kuwaas kasoo laabtay gogosha tacsida Jeneral Maxamed Nuur Galaal.
Sida aan xogta ku helnay, gaariga ayaa wax aa la rasaaseeyey markii uu kasoo gudbay Ko ontaroolka koowaad ee waddada hormarta Xa bsiga Dhexe, ee uu soo gaaray Koontaroolka labaad.
Ciidanka Asluubta ee waddadaas ku leh ko ontaroolka ayaa rasaaseeyay gaariga Imaamka, oo ay la socdeen askar ilaalo u ah, waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray ilaalada iyo labo ka mid ah xubnihii dhaqanka ee la socday Imaamka.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Ca asimada Online u sheegay in ciidamada Ilaala da Asluubta horey lagu wargeliyay in gaariga la socdaan Duubabka Dhaqanka Mudullood, mana cadda sababta ay rasaasta ugu fureen.
Mareykanka oo farriin gaar ah u diray Farm aajo iyo madaxda maamul goboleedyada
Dowladda Mareykanka ayaa farriin toos ah la wadaagtay sii-hayaha xilka madaxweynaha So omaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada, waxeyna ku booriyeen iney xaliyaan arrimaha ku hor gudban heshiiskii doorashada ee 17-kii September lagu gaaray Muqdisho.
Fariintaan kasoo baxday safaaradda Mareykanka ee Soom aaliya ayaa adkeyney sa fariin ka timid bee sha caalamka oo ka digeysa inuu shirka dhaafo 15-ka February, waxeyna sidoo kale ka digeen in cudur daarka ugu weyn uu noqdo inaan wali la isku waafaqin halkii lagu qaban lahaa shirka.
"Waxaan ku boorineynaa hogaamiyayaasha in ey xaliyaan arrimaha looga dooday shirkii ka dhacay dhuusamareeb, ayna wakhti kooban ku qabtaan doorashada, iyadoo aan la dhinac ma reynin heshiiskii doorashada ee 17-kii Septem ber,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay safaarad da Mareykanka ee Soomaaliya.
Fariintaan oo si toos ah u taabaneysa sii hayaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo kana timid xafiiska danjiraha Soo maaliya u fadhiya Mareykanka Donald Yamam oto ayaa la raaciyay:
"Waxaa la joogaa wakhtigii la muujin lahaa hogaan bisil oo jihadiisa cadahay, iyo in mind imo lagu wajaho wax walba, si loogu dhaqaaqo waddo u wanaagsan Soomaaliya isla markaana tusaale u noqota mustaqbalka qaaradda Afrika”Farmaajo iyo madaxweynayaasha shanta aa mul goboleed ayaan wali ku heshiinin arrima ha doorashada, waxaana wali la sugayaa in la isi soo horfariisto isla markaana la dhameeyo wax walba oo ku hor gudban doorashada.
Shirkii Dhuusamareeb wuxuu ku dhamaaday fashil iyadoo sii hayaha madaxweynaha Soom aaliya Maxamed C/hi Farmaajo uu sheegay in uu tanaasul badan sameeyay balse loo tanaa suli waayay. Si kastaba shir ayaa lagu baaqaya an wali la iclaamin halka rasmiga ah ee lagu qa banayo, beesha caalamka ayaana ku riixeysa hogaamiy ayaasha Soomaalida iney heshiiyaan oo ay meel wax wada dhigaan.
Maxay tahay warqadda uu Rooble u dir ay madaxda dowlad goboleedyada?
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay War baahinta ayaa sheegaya in sii-hayha Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu warqad u diray dha mmaan madaxda dowlad gob aleedyada dalka iyo maamul ka gobalka Banaadir.
Warqada uu diray Roo ble ay aa maamullada lo ogu shee gay in ugu dam beyn 13-ka bishan, oo Xalay ku eg, ay soo dirs adaan min 2-qof oo ah guddi fars amo oo ka soo shaqeeya xal u helida qodobada dooda ka taagan tahay ee doorashada Soo maaliya.
Shaqada guddigaan ayaa ah in ay soo diy aariyaan dhowr qodob oo la kala xusho, kuwaas oo ku aaddan qodobada muranka dhaliyay ee doorashada Soomaaliya. Xubnaha ayuu qor shuhu yahay in 14-ka bishaan oo ku beegan Axadda berri ah ay ku kulmi doonaan magaala da Baydhaba ee xarunta gobolka Bay.
DFS waxaa guddigaas ku metelaya wasiirka dastuurka Soomaaliya iyo Amb. Yuusuf Garaad Cumar Axmed. Sidoo kale qaar ka mid ah ma amullada ayaa soo disarady guddiyadaas, gaar ahaan maamullada ku xiran D/federalka.
Waxyaabaha kale ee howsha guddigaan qe ybta ka ah waxaa kamid ah in ay ka soo tala bix iyaan halka uu ka dhacayo shirka ay isugu ima anayaan madaxda dowladda, kuwa maamul go baleedyada dalka iyo maamulka gobalka Bana adir 15-ka bishaan.
Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa ku heshiin waayey hanaanka loo hir-gelinayo heshiiskii ay ka gaa reen doorashada Soomaaliya, waxayna dhawa an ku soo kala tageen Dhuusamareeb, iyagoo aan gaarin wax heshiis ah.
Hadda caqabadda 1aad waxay ka taagan ta hay, halka lagu qabanayo shirka xiga kii fashilka ku soo dhamaaday ee Dhuusamareeb-4, Puntl and iyo dowladda federaalka ayuu midba midka kale ku riixayaa gogosha shirka 15-ka bishan uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigu ka dham aaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Sida muuqata Madaxweyne Farmaajo ma doonayo in talada doorashadu dhaafto isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada, halka Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ay doonayaan in shir ka heshiiska looga gaaro doorashada la balaa riyo oo lagu soo daro dhinacyada kale ee saami leyda siyaasadda, sida musharaxiinta kale, urur rada bulshada rayidka ah, iyo beesha caalamka haatan door dhex-dhaxaadineed ugu jirta So omaalida.
Soomaaliya oo deeq bixiyeyaasha Caal amiga kala hadashay arrimo muhiim ah
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda X FS Md.Cabduqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa kulan ku qabsoomay dhinacca Intenet-ka ee Aal ada fogan araga waxaa uu la yeeshay deeq bix iyayaasha Caalamka ee Soomaaliya ka taage era dhinaca Cadaaladda.
Shirka waxaa lagu falan qeeyey barnaamijy ada cad aaladda iyo asluubta, iyadoo aad looga hadlay horumarra da laga sameeyey xabsiya da Kismaayo iyo Maxkam adda Boosaaso.
Wasiirka ayaa ka hadlay howlaha sanadkaan hortabinta u leh Wasaaradda Cadaaladda ayna kamid tahay qorshaha istraajiyadeed ee shanta sano ee hey’adaha cadaaladda yeelanaayaan.
Ugu danbeyntii waxaa shirka lagu ansaxiyey ho wl-qorsheedka Wasaaradda Cadaaladda Xuku umadda Soomaaliya ee Sanadka 2021.
Shirka waxaa ka qeyb galay deeq bixiyeya asha taageera bahda cadaaladda sida EU, Ne therlands, Sweden, Hey’adda IDLO, iyo dham maan qeybaha hey’adaha Qaramada Midoobay.
Kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyin ka oo Shalay ka furmaya Baydhabo
Guddiyo farsamo oo ka kala socda dowladda Federaalka, maamul Goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir ayaa Shalay magaalada Bay dhabo waxa ay ku yeelanayaan shir loogaga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Guddiyadan ayaa si gaar ah waxa ay kulan kooda ugaga hadli doonaan qodobada la isku haayo ee saldhigga u ah heshiiskii 17-kii bishii September ee 2020 laga gaaray doorashada da lka ka dhaceysa oo haatan uu khilaaf ka taagan yahay.
Min labo xubnood oo ka kala socda Dowlad da Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gob olka Banaadir ayaa ka qeyb galaya Shirka, waxaana shirka fududeynaya Beesha Caalamka oo si dhow ula soconeysa arrimaha laga dood ayo.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Guddiya da marka ay isku waafaqaan, iskuna soo fahm aan qodobada inay horkeeni doonaan Madaxda dowlad Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, si ay kama dambeysta u saxi ixaan oo munaasabad saxiix un kaliya isugu
Beesha Caalamka oo ku baaqday in wada tashi lagala yeesho Saamilayda Siyaa sadda Arrimaha Doorashooyinka
Saaxiibada Beesha Caalamka waxay soo dhoweynayaan ku dhawaaqidda in madaxda DF S &Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dow ladda Federaalka ah (DGXF) ay kulmi doonaan 15ka Febraayo si loo dhameystiro qabanqaab ada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17kii Sebtembar, loona sii amba-qaadi lahaa hor umarkii la gaaray intii uu socday shirkii Madashii Dhusamareeb ee dhowaan qabsoomay.
Saaxiibada caalamku ma aaminsana in su’ aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanyo ay cudurdaar u noqoto dib-u-dhac kasta ee ku yimaada shir-madexeedkan muhiimka ah.
Waxaan ku boorinaynaa madaxda Dowl adda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada, iyagoo ku shaqaynaya ku wada shaqwynaya ni yad wax lagu dhisayo, inay xalliyaan arrimaha yar ee ka harsan wadahadalladii Dhusamareeb isla markaana ay ku heshiiyaan jadwal doora sho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta Heshiiskii 17kii Sebtembar.
Waxaan aaminsannahay inay muhiim tahay in wadahadaladii ka soo billowday Dhusama reeb si dhakhso leh looga mira-dhaliyo marka la guda-galo wada-hadalada soo socda. Waxaan ku dhiirigelineynaa madaxda DFS iyo DGXF ee ka qaybgelaya shir-madaxeedka inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay ula tashadaan saamillayda kale ee Soomaaliyeed si wada-hadadalladu u noqdaan kuwo laga baaraan-degay.
Waxaa la joogaa waqtigii laga fogaan lah aa tallaabooyinka halka dhinac ah oo ay dhina cyadu keligood qaadaan, isla markaana si dha khso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geeddi-socodka doorashooyinka ee 17kii Sebtember si loo soo doorto madaxda Soomaaliya.
Booliska oo ka warbixiyay Qarax Shalay ka dhacay Muqdisho
Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qarax Shalay ka dhacay bartama ha magaalada Muqdisho kaasoo sababay qasa are. War-Saxaafadeed ka soo baxay Booliska Somaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in qar axan ay ku dhaawacme en 7 ruux bale uusan jir in cid ku dhimatay.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in gaadiid kala duw an oo isugu jira kuwo caadi ah iyo Mo otoyin nooca bajaajka la yiraahdo ay ku bur bureen.
Shalay 13-Feb-2021 abaare 9:10 AM, gaari argagixisadu ku soo rartay walxaha Qarxa nuu ciisuna ahaa NOAH 3 albaab ah, ayaa soo jiiray barta hubinta gaadiidka ee u dhow iskoyska Da bka ee Ciidanka Boliiska, Ciidanka oo rasaaseynaya ayuu soo gaaray barta hubinta gaadiidka ee u dhaw isgoyska Sayidka ee laga hubiyo gaadiidka galaya Madaxtooyada. Qaraxa ayaa dhacay dadka oo ka feejignaa dhawaqa rasaasta iyo qeylo-dhaanta Ciidanka, kaas oo sababay qasaare dhaawac oo gaaray ilaa 7 qofood iyo burbur hantiyeed oo ah 8 gaa diid ah iyo 9 Mooto Bajaaj, walow aysan jirin wax qasaare dhimasho ah oo dadka ka soo gaa ray goobta, marka laga reebo naftii haligihii waday gaariga qarxay.
Ilaahay Mahadii, feegijnaanta Ciidanka ayaa sababtay in dadka laga badbaadiyo qatarta arga gixasadu la doonaysay ummadda Soomaali yeed ee aan waxba Shalaysan.
Meydadka dhallinyaro loo dilay si arxan darro ah oo la soo dhigay duleedka Muqdisho
Wararka ka imaanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Habeen hore fal toogasho ah uu ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha.
Dadka deegaanka ayaa kusoo waabariistay meydadka 4 dhalinyaro ahaa oo madax laga-wa da toogtay, kadibna lasoo dhigay Qabuuraha Shiiqaasha ee deegaankaasi.
Sida ay innoo sheegeen dadka deegaanka waxaa dhalinyarada la dilay korkooda ka muuqa atay rasaas, iyada oo aan la ogeyn sababta loo dilay & cidda ka dambeysay.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii dar aya in dhalinyaradaasi inta aan la dilin,ka hor la ga xiray gacmaha, kadibna sidaasi lagu dilay.
Ma jiro weli wax hadal oo kasoo baxay saraaki isha laamaha ammmaanka, balse waxaa go obta lagu arkay meydadka gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Falkan oo si weyn looga hadal-hayo Ceela sha Biyaha ayaa dadka deegaanka ku abuuray cabsi ka dhalatay toogashada arxan darrada ah ee loo geystay dhalinyaradaasi.
Ciidamada ammaanka oo qabtay gaari lagu soo raray qarax
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Da nab ayaa gacanta ku dhigay gaari la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka soo buuxi yeen waxyaabaha qarxa, kadib howlgal ka dhac ay gobolka Shabeellada Hoose.
Nooca gaariga la gu soo raray qaraxa ee ay qabteen ciidan ku waa Homey, wax aa na lagu qabtay tu ula da Cad-Cadeey oo hoos tagta degma da Afgooye gobolka Shabeellada Hoose.
Ciidamada Danab ayaa howlgalkaan sameeyey kadib markii lagu soo war-geliyey in Al-Shabaab ay halkas ku rakibayaan gaari qarax ah, waxa ana u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan, isaga oo aan qarxin.
Saraakiil ka tirsan Danab oo la hadlay Idaa cada Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in gaariga la qabtay uu ku soo wajahnaa magaa lada Muqdisho, in kastoo aan la shaacin barti lmaameed rasmi ah.
Waxay sheegeen saraakiishu in gaarigaas muddo la diyaarinaayey, isla markaana lagu dhit aaneyn rabay shacabka Soomaaliyeed, balse ay ka hor tageen sida ay hadalka u dhigeen.
Saraakiisha u hadashay Danab waxay sheeg een in shacabka ku nool deegaanka lagu diyaar inayey gaarigan qaraxa ah ee Cad-Cadeey ay ku soo war-geliyeen, iyaguna ay uga howlgal een si naf hurnimo ah.
Inta badan qaraxyada ku rakiban gaadiidka ee Al-Shabaab ay weerarrada uga geystaan gu daha caasimadda Muqdisho ayaa lagu soo rak ibaa gobollada Shabeellooyinka oo waqooyi iyo koonfurka ka kala xiga caasimadda Soomaaliya.
Jawaari oo shaaciyey ‘qorshaha’ Farm aajo ee 13-ka kursi ee Gobolka Banaadir
Gudoomiyihii hore Baarlamaanka Federaa lka Soomaaliya Prof. Maxamed Cismaan Jaw aari ayaa sheegay inay tahay arrin olole doora sho ah kuraasta gobolka Banaadir eee uu dhow aan saxiixay Farmaajo.
Md.Jawaari ayaa sheegay in ay tahay wax aan wanaagsa neyn in kuraasta gobolka Banaa dir loo adeegsado olole doora sho, balse ay tahay xaq uu lee yahay gobolka Banaadir.
Prof. Jawaari, oo su’aalo lagu weydiiyay bar naamij dood wadaag ah oo ay soo qaban qaa biyeen warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho, ayaa la weydiiyay su’aal ku saabsan mustaqbal ka 13-ka kursi ee la yiri halaga siiyo aqalka sare gobolka Banaadir.
Wuxuu ka sheekeeyay iney sanadkii 2016 soo martay arrintaan, islamarkaana Baarlamaan kii 9-aad uu go’aan ka gaaray, sida uu sheegay, wuxuuna qiray in Xamar ay xaq leedahay lana siiyo wax xalaal ah, balse in olole siyaasadeed iyo olole doorasho midkood lagu galo aysan is aga la fiicneyn.
"Aniga waxaan jeclahay marka qofka wax la siinaayo in si xalaal ah wax loo siiyo, laakiin in olole doorasho iyo mid siyaasadeed laga dhigto ma jecli, Xamarna xaq wey leedahay, baarlam aanka 9-aadna go’aan cad ayuu ka gaaray arin kaa,s”ayuu yiri Prof.Jawaari.
Si kastaba sii hayaha madaxweynaha Soo maaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ansixiyay 13-ka kursi ee gobolka Banaadir, wa low aan wali la horgeynin Baarlamaanka hada na Prof. Jawaari wuxuu u arkaa iney tahay olole siyaasadeed iyo mid doorasho in xiligaan lagu soo aadiyo.
Weerar bambaano oo Xalay ka dhacay Beledweyne
Wararka aan Xalay ka heleyno M/ Beled weyne ee Xarunta G/Hiiraan ayaa waxaa ay she egayaan in werar bambino lagu qaaday Bar-ko ontorool oo Ciidamada Ammaanka ku leeyihiin Magaaladaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in weerarka bambaano lagu qaaday koontroolkaCiidamada Amaanka ay ku leeyihiin Xaafada Buundweyn Gaar ahaanCiidanka ilaalada ka haayo Buunadada, isla markaana uu jiro khasa aro ka dhashay.
Wararka ayaa waxaa ay intasi ku darayaan in Ciidamada werarka bambaano lagu qaaday ay rasaas fara badan fureen,taas oo an weli la sha acin khasaaraha ka dhashay.
M/Beledweyne ee Xarunta G/Hiiraan ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay xaaladeeda amni ahe yd mid wanaagsan marka laga reebo banaanba xyo rabshado watay oo ay dhigayeen dad kasoo horjeeda Maamulka Cusub ee Hir-Shabeelle.
Shir looga hadlayay ka hor tagga COVID-19 oo lagu qabtay Muqdisho
Ra’isul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Shalay shir gu ddoomiyay kulan looga hadlay xakameynta iyo ka hor tagga soo labo kacleynta COVID-19 ee dalka, sida ay sheegtay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abi ikar Nuur.
Wasiirka caafimaad ka ayaa xustay in tirada kiisaska xanuunka ay sii kordhayaan, isla marka ana ay muuqato soo la bo kacleyntii labaad ee cudurka.
"Kowdii ilaa 11 Febraayo ku dhowaad labo usbuuc tirada kiisaska ay aad u korartay dad ba dan ayaa isbitaal De Martini la geeyay,” ayay tiri wasiir Fowziya.
Shirka waxaa looga hadlay sidii wacyigelinta xanuunka loo kordhin lahaa waxayna isla gar teen in la soo celiyo xirada af-xirka ama Face-mask, la kala fogaado isla markaana dadka waa weyn si gaar ah loo ilaaiyo, si loo xakameeyo faafitaanka cudurka.
Sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaad ka todobaadyadii u dambeeyay wxaa kordhay ti rada kiisaska cudurka corona iyadoo dhimasho badan la soo wariyay, sidoo kale waxaa jira bu kaano badan oo la geeyay isbitaal De martini ee magaalada Muqdisho.
Heshiis hordhac ah oo laga gaaray Colaada degaanka Xananbuure
Waxaa Shalayta heshiis horudhac ah laga ga aray dagaalkii 2da maleeshiyo Beeleed ku dhe x-maay degaanka Xananbuure ee G/Galgadu ud, ka dib kulamo maalmihii la soo dhaafay ka socday halkaas.
Odayaasha labada Beelood ay kasoo kala jeed aan malee shiya adkii dagaalamay ayaa saxiixay heshiiska horudhaca ah oo ka kooba 12 qodob, waxaana la go’aamiyay in muddo todobaad gud ahood ah la isku keeno si loo dhameystiro he shiiska.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Odayaasha Dhaqan ka & Waxgaradka labada Beelood ayaa goobjo og ka ahaa madasha heshiiska lagu gaaray, wa xaana heshiiska garwadeen ka ah wasiir Kuxig eenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cabdiramaan Al-Cadaala, Xildhibaan Cabdix akiin Macalin Axmed iyo Masuuliyiinta ka tirsan Galmudug .
Hoos Ka Akhriso 12 Qodoboo uu ka kooban yahay heshiiska horudhaca ah ee la gaaray.
Odoyaasha Dhaqanka labada Beelood wa xaa ay ka xun yihiin colaadii foosha xumeyd ee dhex martay waxaana ay katacsiyadeynayan qa saarihii ka dhashay naf iyo maal.
Waxaa la isla gaaray xabad joojinta buuxda oo shuruud la’aan ah taasoo ka hirgasha dham aaan deeganada ay colaadu sameysay.
Xabad joojintan waxaa ay kawada Dhaqane gal eysaa dhamaan deeganada labada beelood wada degaan ee ay colaadu saameysay.In laga fogaado waxkasta oo xabad joojinta wax u dhibi Kara ficil iyo hadal intaba si loo soo celiyo kalsoonida bulshada.
In deegaanka Xananbuure dib loogu celiyo dadkii shacabka ahaa Ee ka barakacay si nolo shu ay caadi ugu soo noqoto.
Cidii jabisa xabad joojinta waxaa loo aqoonsan ayaa qaswade waxaana ciidanka amnigu fasax u qabaan In ay ka qaadaan tilaabada ku ha boon.
Waxaa la dhisay guddi ka kooban 15 xubno od oo ka kala imaanaya beelaha uu dagaaalku dhex maray iyo xubno ka socda Maamulka Gal mudug.
Laga bilaabo 13/02/2021 waxaa ka mamnu uc ah deegaanka Xananbuure in lagu dhex wa to hubka waaweyn iyo midka yar yar iyadoo cidii Lagu arko ay ciidamada amnigu amar u heist aan in ay kala wareegaan hubka, qofka watana ay ka qaadaan tilaabada ku haboon.
Gaadiidka gaarka loo leeyahay Ee lagu oga ado inuu ka qeyb qaadanaayo ficilada nabadg alyada lidka ku ah waxaa uu wajihi doonaa ciq aabta ku haboon.
Laga bilaabo Shalay 13/02/2021 qofwalba oo geysta fal dambiyeed waxaa odoyaasha lab ada beel waajib ka saaranyahay inay soo qab taan eedeysanaha iyagoo gacan ka helaya cii danka amniga.
Muddo 7 beri gudahood ah waxaa la dhigi doonaa gogol dib u heshiisiineed oo ay labada beel kuwada hadlaaan si looga heshiiyo dham aan waxyabaha sababay dagaalka.
Waxgaradka iyo odoyaasha labada dhinac waxaa ay u mahad celinayaan cid kasta oo he shiiskan gacan ka geysatey.
Ciidamada Dowladda oo howlgaĺ ka sameeyay duleedka Beled-Xaawo
Ciidamada Nabad Sugida Soomaaliya iyo Kuwa Guutada Kumaandooska Gorgor oo iskaa shanaya ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo Amn iga ka sameeyay, degaano dhaca Degmada Bal ad-Xaawo ee Gobolka Gedo.
Ciidmada ayaa howlgallada oo ahaa Amni xaqiijin waxaa ay si gaar ah uga fuliyeen deg aannada kala ah Haroodi, Liibaanraa ge, Xayga cad, Burku us, Haartacad, Najax iyo degaano ka le oo hoos taga Beled-Xaawo.
Howlgallada ayaa waxaa hoggaaminayay Taliyaha Howlgalinta Ciidamada Kumandooska Gorgor Cumar Xasan Deeq iyo Taliyaha Ciidan ka xasilinta Gobolka Gedo Bakaal Kooke, wax aana ay sheegeen in howlgalka ay ku sugnaay een Amniga degaannada hoostaga Beledxaawo sidoo kale ay ku baadi goobayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in ay sii wa di doonaan howlgallada ilaa degaannada kale ee Gobolka Gedo laga saarayo Al-Shabaab oo meelo ka mid ah weli ku sugan.
Howlgalka laga sameeyay duleedka Beledxaa wo ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli saacadi hii la soo dhaafay Ciidamada Dowladda Sooma aliya ay howlgallo ka sameeyeen degaano hoo staga degmada luuq ee Gobolkaasi Gedo.
Jaamacadda Carabta oo war ka soo saar tay xaalada Soomaaliya iyo ismarwaaga doora shadaUrurka Jaamacadda Carabta ayaa ugu baa qay hoggaamiyayaasha siyaasadda Soomaa liya inay wada hadlaan si loo dhameeyo khila afaadka jira isfaham buuxana looga gaaro ar imaha doorashada ee leysku hayo.
Baaya ayaa lagu sheegay in Ururka Ja amacadda Carabta oo si dhaw ula socdo dadaallada ay sameyna yaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad gobolleedyada ee ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis buuxa oo lagu dhameynayo madmadow ga siyaasadeed ee jira.
''Waa in si dhaqse leh loo bilaabaa wada ha dallada lagu xalinayo khilaafka doorashada si dalka Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho na baddoon oo leysla ogol yahay''' ayaa lagu yiri baaqa Ururka Jaamacadda Carabta.
Wadamo badan iyo Ururo Caalami ah oo daneeya Arrimaha Soomaaliya ayaa baaqyo ka la duwan ka soo saarey xaalada cakiran ee siya asada Soomaaliya maadama weli an wax hehs iis ah laga gaarin doorashooyinka Soomaaliya.
Dowladda Britain oo shaacisay tirada dadka laga tallaalay COVID-19
Britain waxaa la sheegayaa in ay dhowdah ayinay gaarto hadafkii ay tiigsanay bartamaha bishan Febraayo, kaasi oo ah in xanuunka CO VID 19, laga tallaalo 15 milyan oo ka mid ah ko oxaha u nugul ee ku hawlan ka hortaga fayras ka Corona, taasi oo horseedi karto yareynta faafitaanka xanuunk an.
In ka badan 13.5 milyan oo qof ayaa la talla alay tan iyo mar kii barnaamijka tallaalka ugu w eyn taari ikh da UK laga bilaabay horraantii bishii Diseemb ar ee sanadkii tagay, celcelis ahaan 431,323 qof ayaa helayay maalin kasta intii uu socday Tall aalkan.
Ra’iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ay aa balan qaaday inuu talaalayo dhamaan dadka ku taxan afarta qaybood ee mudnaanta leh, oo ay ku jiraan dadka ay da’dooda ay ka weyn tahay 70-ka sano, dadka degan guryaha darye elka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha muhiimka ah.
Dhanka kale, Xukuumadda Welsh, oo si ma daxbanaan u wadata siyaasadeeda caafimaad ka, ayaa sheegtay inay ku guuleysan doonto ha dafkeeda ah talaalka afarta koox ee mudnaanta la siinayo.
Tirooyinku waxay muujiyeen in qiyaastii 22% dadweynaha Wales ay heleen tallaal, mar ka la barbardhigo dadka England tallaalkan he lay 20.3%, sidokale reer Scotland ayaa dhan kooda helay 19.2%, halka dadka Waqooyiga Ireland ku nool ay Tallaalkan ka heleen 18.7%.
Johnson wuxuu ballan-qaaday inuu dib-u-eegi doono dhammaan xogta khuseysa Tallaalkan, ka hor inta uusan sameynin waddada ay dowl addiisa ku wajaheysa xanuunkan bilaha soo socda.
"Waxaan horumarin doonaa qaab kale oo loo wajahayo yareyntafaafitaanka xanuunkan, ta as oo ay ku jiri doonto qorshayaal dib u furida Is kulada.” Sidaas waxaa warbaahinta u she egay Af hayeen u hadlay Boris Johnson.
Hoggaamiyaha Burcadda disha Ganacsata da Soomaaliyeed ee dalka Koofur Afrika oo la qabtay
Booliiska wadanka Koofur Afrika ayaa Shalay xabsiga dhigay Nin la sheegay inuu yah ay hoggaamiyaha Burcadda hubeysan ee dilal ka u geysata shacabka Soomaaliyeed ee ku no ol dalka Koofur Afrika.
Ciidanka Booliiska Koofur Afrika ayaa Ninkan ka qabtay deegaanka lagu magacaabo Motherwell oo ka tirsan magaa lada Port Elezapeth ee dalkaa si.
Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa inoo sheegay in Ninka la qabtay uu ka dambeyay dilal fara badan iyo dhac loo geystay muwadiniin Soomaaliyeed oo goobo ganacsi ku lahaa deegaanka Motherwell.
Ninkan Booliiska gacanta ku dhigeen ee ahaa hoggaamiyaha Buracada hubeysan ee dalka Ko ofur Afrika ayaa qabashadiisa waxay kusoo bee gmeysa xili saacadahii la soo dhaafay maga alada Port Elezapeth iyo nawaaxigeeda dilal iyo dhaawacyo loogu geeystay ganacsato Soomaali yeed.
Qabashada hoggaamiyaha Burcada hubeys an ee Koonfur Afrikaanka ah ayaa kusoo aade ysa iyadoo habeenkii Habeen hore ahaa dilal loogu geystay magaalada Port Elezapeth muwadiniin lagu kala magacaabi jiray Mikaa'iil Bitoow iyo Cabdixakiin Jeelle oo lagu dhex dilay goobtooda ganacsi.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada waxay Jimcihii u doorteen Karim Khan oo reer Britain ah dacwad oogaha cusub ee muddo sa gaal sano ah.Khan ayaa ka guuleystay codbixin qarsoodi ah seddex musharax oo kale si loogu badalo dacwad oogaha hogaamiyaha Fatou Bensouda. Maxkamadda fadhigeedu yahay ma gaalada Hague oo ka kooban 123 xubnood, oo shaqada bilawday ku dho waad 20 sano ka hor, wa xay gacanta ku haysaa da mbiyada dagaal, dambiya da ka dhanka ah aadana ha, xasuuqa iyo dambiyada gardarada ah.
Garyaqaanka reer Ingiriis Karim ayaa caan ku ah inuu madax u noqdo kooxda baaritaanka ga arka ah ee Qaramada Midoobay ee baareysa dambiyada dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq.
Intii uu ku jiray xirfadiisa sharciga ee 27 sano Khan, oo sidoo kale ah Queens Counsel, wuxuu u shaqeeyay ku dhowaad maxkamad caalami ah oo kasta oo dambiilayaal ah doorka dacwad qaadista, difaaca iyo lataliyaha dhibbanayaa sha. Marka laga hadlayo ICC Khan wuxuu caan ku yahay inuu noqdo hogaamiye qareen difaaca oo ka soo shaqeeyay kiisaska Kenya, Sudan iyo Libya. Waxaa jiray loolan siyaasadeed oo xoog leh oo loogu jiray shaqada ugu sareysa ICC xili si aad ah loo baaray xafiiska xeer ilaaliyaha.
Maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykan ka Donald Trump ayaa cunaqabateyn saaray sa nadkii hore shaqaalihii maxkamada oo ay ku ji rto Bensouda taas oo salka ku heysay baarit aano xafiiskeeda uu ku sameeyay dambiyo dag aal oo laga yaabo inay ka dhacaan Afghanistan, oo ay ku jiraan ciidamada Mareykanka. Mareyk anku xubin kama aha maxkamadda.
Maamulka cusub ee Madaxweynaha Mare ykanka Joe Biden ayaa "si buuxda dib u eegis u gu sameyn doonaa” cunaqabateynta saaran sar aakiisha ICC, afhayeen u hadlay Waaxda Arri maha Dibadda ayaa sheegay bishii la soo dha afay.
Kadib usbuucii la soo dhaafay maxkamaddu waxay sheegtay inay awood u leedahay dembiy ada dagaal ee ka dhacay dhulalka Falastiin, taa soo u horseedi karta baaritaan ay si adag uga soo horjeedaan xubnaha aan ka tirsaneyn ICC-da ee Israel iyo Mareykanka.
Mid ka mid ah go’aannada ugu horreeya ee Khan wuxuu noqon karaa haddii la sii wado ba aritaan buuxa oo ku saabsan dhulalka Falastiin iyiinta, halkaas oo Bensouda ay sheegtay inay ji rto sabab macquul ah oo lagu soo gabagabeeyo dambiyada dagaal ee laga yaabo inay galeen 2da ciidan ee Israel iyo kooxaha hubeysan ee Falastiin.
Nin Soomaali ah oo geystay labo kufsi oo ka badbaaday in laga soo masaafuriyo UK
Nin Soomaali ah oo la sheegay inuu labo ku fsi geystay ayaa loo oggolaaday inuu sii joogo dalka UK sababo la xiriira caafimaadka dhimirk iisa darteed.
Ninkaan oo 49 jir ah ayaa tagay Ingiriiska sa nadkii 2004 wuxuuna dalbaday magangalyo, laakiin wasaarada arimaha gudaha ayaa doon eysay inay masaafuriso ka dib markii uu maray sideed xukun muddo lix sano gudahood ah.
Dambiyada uu galay ayaa waxaa kamid ah, Dhac, inuu isku dayay inuu cadaaladda ka baxs ado iyo kufsiga laba dumar ah oo kala duwan.
Wuxuu xirnaa in ka badan toddobo sano. Laakiin walwalka laga qabo caafimaadka dhimi rkiisa, ayaa ka dhigan tahay inuu awoodo inuu sii joogo UK.
Garsooraha socdaalka ayaa aqbalay in dar yeelka caafimaadka dhimirka uu 'aad u liito' gu daha Soomaaliya 'iyo in dadka qaba arimaha ca afimaadka dhimirka, badanaa ay la kulShalay koor loolana dhaqmo si ka baxsan bini'aadani mada.
UK ayaa 60 qof oo dalkeeda ku sugnaa wa xay ku celisay dalalkooda oo kala ah Ghana, Ni geria iyo Sierra Leone, waxaana ku jiray 25 da mbiilayaal ah oo u xirnaa danbiyo ay kamid yi hiin dil, kufsi caruur iyo dambiyo kale.
Maxkamadda ICJ oo diiday codsigii Ken ya ee dib u dhigista kiiska badda
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) ayaa ku gacan seertay codsigii dowladda Kenya ay ku dooneysay in mar kale dib loo dhi go dhageysiga kiiska badda Soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda Soomaa liya. Ra’iisul Wasaare ku-xige enka Soomaaliya Mahdi Maxa med Guuleed ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynasyo go’aankan kama dambeysta ah, oo sida uu shee gay, Dorraad Shalay Maxkamadda Adduunku ay ku laashay codsigii Kenya ay ku dooneysay in mar kale la dib dhigo dhageysiga dacwadda baddeena ee ay ina ku haystaan hoggaanka dalkaas.
Sida horey loo qorsheeyey dhageysiga dac wadda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay dhici doontaa 15-ka illaa 19-ka bisha March ee san adkan.
Mahdi Guuleed ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay si mug leh ugu diyaar garoobeen in ay difaacdaan xaqooda soo jireenka ah ee xuduud biyoodka ay la wadaaga an dalka Kenya, iyadoo lagu ballansan yahay in dhageysiga dacwadda ay qabato Maxkamadda Aduunku 15-19 Bisha Maarso ee sanadkan.
"Waxaan shacbi weynaha Soomaaliyeed u sheegayaa innagoo ku kalsoon Ilaahey, ku kals oon taageerada iyo garab istaagga mar walba aad dowladda Soomaaliya la barbar taagan tih iin in aynu ku matalno danta ummadda Soomaa liyeed, xaq iyo caddaaladna ku helno doodeen na iyo dacwaddeenna.”
Ra’isuul Wasaare Mahdi oo uga mahadceli yey shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu garab taagan yihiin Madaxdooda iyo dowladdooda dac wadda hortaalla Maxkamadda Adduunka ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadin kasta, gaar ahaan hormuudka bulshada in ay si dhow u gu taan doorka qaran ee kaga aaddan difaaca bad deena, midnimo iyo wadajirna aynu ku wajahno damaca qaawan ee Kenya.
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka XFS Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu hambalyee yey Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farm aajo oo habeen iyo dharaarba heegan u ahaa miro dhalka dacwaddan, si dhowna ula shaqe ynayey khubarada sharciga iyo mas’uuliyiinta Soomaaliyeed ee dacwaddan gacanta ku haya.
Maamulka madaxweyne Biden ayaa shee gay inuu billaabaya in si tartiib tartiib ah ay Mar eykanka u soo galaan kumannaan qof oo mag angalyo doon ah oo haatan ku xayiran dalka Me xico.Waxa uu sheegay in laga billaabo usbuuca soo socda uu ka hawlgali doono codsiga 25,000 oo qof oo dacwaddooda magangelyo doonka ay haatan diyaarka tahay.
Dadka magangelyo doonka ahi ayaa marka hore waxaa laga rabaa inay isa soo diiwaan geliyaan oo ay soo maraan baaritaanka cudurka Covid-19, ka hor inta aan loo ogo laan in ay ka soo tallaabaan xudduudda.
Tallaabadan ayaa lagu doonayaa in lagu la alo siyaasadihii sida weyn loo dhaliili jiray ee ma daxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump.
Sharcigan ayaa dhigayay in muhaajiriinta maga ngelyo doonka ahi ee ka soo tallaabaya dhanka xudduudda koonfureed ay ku sii hakadaan Mex ico, inta dacwaddooda ay go’aan ka gaarayaan maxkamadaha arrimaha socdaalka ee Mareyk anka.
Balse maalintiisii ugu horreysay ee uu xafiis ka la wareegay ayaa madaxweyne Joe Biden wuxuu laalay sharcigaasi. Masuuliyiinta Mareyk anka ayaa sheegaya in dadka magangelyo doonka ahi loo ogolaan doono in ay gudaha u galaan Mareykanka balse ay tahay in marka loo baahdo ay yimaadaan maxkamadaha ku yaal magaalooyinka ay ku wajahan yihiin.
Waxaana sanadkii la soo dhaafay, hay’adda sa mafalka ee Human Rights First ay sheegtay in "qoysaska la soo celiyay, carruurta iyo dadka waaweyn la geynayo xeryo ay ka jirto xaalado aad u halis ah oo dad badan ay ku wajaheen af duub, weerar, tacaddi galmo, hanjabaad iyo dha ibaato
Meydadka Dad La Dilay Oo Saakay Lagu Arkay Xaafad Ka Tirsan Muqdisho
Waxaa saakay xaafad ka tirsan degmada De yniile ee Gobolkaan Banaadir lagu arkay Mey dadka saddex qof oo halkaas lasoo dhigay, wa xaana kasoo baxaya fa ah fa ahino dheeraad ah.
Dad dul-tegay Meydad ka saddexda qof ayaa waxaa ay ku sheegeen inay ahaayeen Haween, isla markaana jirkooda ay ka muuqdeen rasaas oo loo maleynayo in loo adeegsaday dilkooda.
Dadka deegaanka qaarkood ayaa waxaa ay ku warrameen in Meydadka saakay dadkaas la gu arkay Waaxda kur-damac ee degmada De yniile ee Gobolka Banaadir, isla markaana la aq oosan waayay waxa ay ahaayeen dumarka la dilay.
Maamulka degmada Deyniile ee Gobolka ayaan weli ka hadlay dadkaas Meydadkooda lagu arkay gudaha degmadaas, waxaana warar ka qaarkood ay sheegayaan in goobta ay tage en Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda.
Habeen horey ayey markii sidaan oo kale Meydadka 4 qof oo rag ah, isla markaana la di lay lasoo dhigay degaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho, iyadoona dad ka deegaanka falkaas uu ku noqday mid argag ax ku abuuray.
Baaritaan ay sameysay Caasimada Online ayey ku ogaatay in hay’adaha shisheeye ee da gan Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho helaan inta ugu badan xogta qaraxyada ka dha ca magaalada Muqdisho ka hor inta aysan dhi cin. Hay’adahaan oo fadhigoodu yahay Xalane ayaa labadii qarax ee ugu dambeeyay islamark aana ka dhacay Muqdisho shaaciyay kana digay 48 saac ka hor, waxeyna qaraxyadaas u dhaceen sidii ay u sheegeen.
Inkastoo aysan hay’a duhu she egeen bartilmaameedka oo toos ah, nuuca qar axa ama gaariga iyo saacada ama maalinta uu ku aadan yahay, hadane waxey bixiyaan digniin abuuri karta feejignaan iyo taxadar. Si kastaba, maadaama aysan sheegin goobta rasmiga ah ee qaraxa, way adag tahay in laga hortago.
Caasimada Online oo la hadashay Soomaali iyo ajaaniib dagan Xalane, islamarkaana qeyb ka ah hay’adaha shisheeye ee dhanka amaan ka ayaa ogaatay in lacag badan oo kumanaan kun oo dollar ah ay ku bixiyaan helista xogta qaraxyada.
"Waxaa lacag la siiyaa Soomaali aad xog og aal u ah, qaarkoodna xiriir la leh qaar kamid ah kuwa soo abaabula qaraxyada, ama kuwa kale oo ka agdhow, balse ma sheegi karaan bartil maameedka oo sax ah, mararka qaarna way noo sheegaan kadibna cida ay quseyso ayaa la wadaagnaa balse markasta waxaa soo saarnaa digniin guud,” ayuu yiri qof Soomaali ah oo la shaqeeyaa hay’adaha Xalane.
Soomaalida lacagta kumanaanka dollar ah ku qaata helista xogta qaraxyada, ayaa sidoo kale lacagtaas wax ka siiya xubno ku jira Sha baab ka oo xogta usoo gudbiya.
"Ma heli karno mana heysano qalab lagu og aan karo qaraxa, nuuca gaariga, balse waxan la cag ku bixinaa inaa ogaano qaraxa iyo marka uu soo galo ama ku soo wajahan yahay Muqdi sho,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay qofka la had lay Caasimada Online.
"Sidee ayaa ku aamintaan xogta aad hesha an,” ayaa la weydiiyay waxa uuna ku jawaabay "waxaan ku aaminaa in qofka aan marka hore is aga baarno, xogaha aan ka qaadano imise ayaa ka run ah ama ka been ah, xil nuucee ah ayuu ka dhax haayaa Al-Shabaab, ma badno inta jeer ee been aan kala kula kulano balse bartilma ameedka waa badali karaan mararka qaar,” ayuu yiri.
Trump oo lagu waayay dacwad ah inuu ka da mbeeyay weerarkii Aqalka Kongreska
Aqalka sare ee Mareykanka ayaa shan ma almood kaddib soo afmeeray dacwaddii Donald Tr ump ee uu waday. Sida horayba loo saadaa linayey, go’aanka ugu dambeeya wuxuu noqday inuu wax lug ah ku laheen weerarki bishii hore lagu qaaday aqalka Koongreska Mareykanka.
Taariikhda Mareykanka waxaa horay uga dhac ay afar iskuday oo xil ka qaadis madaxweyne ah, balse dacwadda Trump ayaa noqoneysa tii ugu dambeysay. Trump ayaa markale ka guule ystay xisbiga dumuqraadiga dacwaddii ay la damacsanaayeen, kaddib marki ay si weyn u garab istaageen xubnaha xisbigiisa Jamhuuriga.
Codkii kama dambeysta ee amuurtan uu aqal ka sare uu u qaadayna waxay ku dhamaatay diidma aqlabi yad oo ah 57/43 iyada oo dac awadda si ay u meel marto loo ba ahnaa cod aqlabiyad oo 3 meelood meel ah.
Biden inta ay dacwadda socotay wuxuu ka ha dlay oo keli ah muuqaalki ku saabsanaa we erarkii taageerayaasha Trump ay u geysteen aqalka Koongreska ee marar badan laga sii da ayey warbaahinta dalka Mareykanka.
Qareenada u doodaya madaxwaynihi hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka jawaab ay eedeymihii loo soo jeediyay ee xil ka qaadist iisa ay horey ugu sameeyeen aqalka wakii llada.
Qareennada ayaa waxay sheegen in taagee rayaashiisa 6-dii bishii January weeraray xaruun ta Congreska ay ahaayeen kuwa si iskood ah u sameeyay falkaasi oo uusan madaxwaynaha amrin.
DF oo xirtay mid ka mid ah waddooyinka hal bowlaha u ah Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay dhagxaan dhigtay bartamaha isgoyska Dabka ee maga alada Muqdisho, halkaas oo ah goob aad u maq shuul badan.
Gaadiidka isticmaalaya wadada Maka Al-mu karrama ayaa toos uga gudbi kara isgoyska dab ka, isagoo aan u leexan karin dhanka isgoyska Bakaaraha ama dhanka kale ee xarunta degma da Waaberi, hadii uusan ku socon seedka xiga.
Inta badan isgoyska Dab ka ayaa ah mid mashq uul badan oo mar kasta ay gawaaridu isku xayi rmaan, iyadoo ay jooga an ciidamo Taraafiko ah oo kala haga gaadiid ka, intii ay awoodaan.
Tallaabadan lagu kala xiray wadadaan muhii mka ah ayaa imaaneysa iyadoo shalay gaari qarax siday uu xoog ku dhaafay bar control oo ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn isgoyska dabka, kaas oo qarxay inta uusan gaarin barta control ee taallada Sayidka, kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada uu soo dhaafay.
Horay dowladda Soomaaliya ayaa sidaan oo kale dhagaxaan ugu jartay isgoyska Soobe oo mar uu ka dhacay qaraxii ugu weynaa ee abid Soomaaliya ka dhacay, kaas oo galaaftay nolo sha dad badan.
Isgoyskaas oo ahaa mid mashquul badan ay aa hadda waxaa dhagaxdii lagu jaray dhibaato weyn ku qaba gaadiidka u leexanaya dhanka xa afadda Buulaxuubey ama degmada Wadajir, ba lse waxaa intii hore ka yaraatay saxmadii gaad